Resin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa 73 noho 00 ny Makis an’i Madagasikara omaly, tamin’ny lalao faharoa natrehiny amin’ny Women's Cup 2019 tanterahina ao Johannesburg atsy Afrika Atsimo. Niondrika nanoloana an’i Kenya tamin’ny isa 35 noho 05 i Madagasikara tamin’ny lalao voalohany natrehiny tamin'ny zoma 9 aogositra 2019.
lundi, 12 août 2019 22:26
Lalaon’ny Nosy: Notolorana mari-boninahitra ireo Atleta nitondra avo ny hambopom-pirenena
Notoloran'ny Filoham-pirenena mari-boninahitra ireto mpanao fanatanjahantena sy mpanazatra azy ireo androany 12 aogositra 2019, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Miisa 13 ireo Atleta nahazo medaly volamena mihoatra ny roa izay nosalorana ny mari-boninahitra “Chevalier de l’Ordre national”. Atleta 78 nahazo medaly volamena nahazo ny mari-boninahitra « Commandeur de l'Ordre de Mérite Sportif », 61 medaly volafotsy nahazo ny « Officier de l'ordre du mérite sportif », ary 63 medaly alimo nahazo ny « Chevalier de l'ordre du mérite sportif ». « Mampirisika hatrany ny mpanao fanatanjahantena aho », hoy ny Filoham-pirenena ka « nampitomboina avo efatra heny ihany koa ny fandrisika an'ireo Atleta sy mpanazatra amin'ity taona ity ka mahatratra 305.750.000 Ariary ny totalin'izany ». Efa nampitomboina ihany koa ny teti-bolam-panjakana natokana ho an’ny fanatanjahantena mba hanatsarana ny fanomanan’ireo Atleta hiatrika fifaninanana na nasionaly izany na iraisam-pirenena.
dimanche, 11 août 2019 20:08
Karaté-do: Fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara
Notanterahina androany alahady 11 aogositra 2019 tao amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja karate.
Tonga androany alakamisy eto Madagasikara ny ekipan’ny Pamplemousse SC avy atsy Maorisy. Hiatrika lalao mandroso amin’ny dingana savaranonando amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny ekipa tompondaka, na Total CAF Champions League 2019 izy ireo, lalao izay hatao ao amin’ny Stade Rabemananjara - Mahajanga, ny tolakandron’ny sabotsy 10 aogositra 2019. Hifandona amin’izany ny klioban’ny Fosa Juniors (Mahajanga) sy ny Pampelmousse SC.
jeudi, 08 août 2019 19:34
Kianja Makis Andohatapenaka: Havaozina ho tsara ny bozaka
Taorian’ny fanokafana ny foara Fier Mada teo Andohatapenaka omaly alarobia 08 aogositra 2019, no nilazan’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina fa havaozina atao bozaka tsara ny kianja filalaovana rugby ao amin’ny Kianja Makis Andohatapenaka.
mercredi, 07 août 2019 21:41
CAN Rugby - Vehivavy: Manantena vokatra avy any Afrika Atsimo ny mpitia baolina lavalava
Hotanterahina atsy Afrika Atsimo ny 9 hatramin'ny 17 Aogositra 2019 ho avy izao ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika (CAN) eo amin'ny taranja rugby lalaovin'ny olona 15. Hiatrika izany ny "Makis de Madagascar" vehivavy. Ahitana mpilalao ao amin'ny klioban'ny 3FB miisa 5 mirahavavy ao amin'ny ekipa nasionaly. Nanome vatsin-dalana ho azy ireo ny Minisitra ny Fahasalamam-bahoaka tamin’ny alalan’ny Talen'ny Kabinetra, ny alatsinainy 05 aogositra 2019, teo amin'ny toeram-piasany Ambohidahy.
mercredi, 07 août 2019 13:53
Hotanterahina ao amin’ny Kianja Rabemananjara – Mahajanga ny tolakandron’ny sabotsy 10 aogositra 2019 izao ny lalao mandroso amin’ny dingana savaranonando amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny ekipa tompondaka, na Total CAF Champions League 2019. Hifandona amin’izany ny klioban’ny Fosa Juniors (Mahajanga) sy ny Pampelmousse SC avy atsy amin’ny nosy Maorisy.
Nandresy ny ekipan’i Morondava (akanjo manga sy mena amin’ny sary) ny ekipan’i Mahabo, teo amin’ny lalao baskety sokajy handisport lehilahy nandritra ny famaranana teto Morondava ny 3 aogositra 2019. Ny ekipan’i Mahabo no hisolotena an’i Menabe amin’ny fifaninanana nasionaly hatao any Toamasina amin’ny volana septambra 2019. Olana ho azy ireo amin’izao ny enti-manana. (Jereo Sary Tohiny)
Miisa 16 ireo ekipam-pirenena miady ny tapakila ho amin’ny dingana famaranana amin’ny CHAN 2020 hatao any Cameroun. Tafita avy hatrany ho amin’izany dingana famaranana izany i Cameroun, noho izy firenena hampiantrano ny CHAN 2020. Miisa 15 ireo lalao fifanintsanana dingana faharoa, ka izay tafita amin’ireo no hiazo an’i Cameroun:
dimanche, 04 août 2019 22:49
Kitra - CHAN 2020 : Namibia no adversera manarak’i Madagasikara
Samy manohy ny dia, tafakatra ho amin’ny dingana faharoa amin’ny fifanintsanana amin’ny CHAN 2020 i Madagasikara sy Namibia. Namibia no ekipa manaraka hifandona amin’i Madagasikara. Voatazon’i Comores ady sahala samy tsy nitoko i Namibia tamin’ny lalao miverina tany Namibia androany. Efa nandresy 2 noho 0 anefa i Namibia tamin’ny lalao mandroso tany Comores ka io no mitondra azy ireo ho amin’ny dingana manaraka.